Maraykanka oo markale ka digay weeraro culus oo ka dhaca dalka Kenya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka oo markale ka digay weeraro culus oo ka dhaca dalka Kenya.
On Feb 5, 2019 195 0
Cabsi xoogan oo soo food saartay muwaadiniinta Reer-galbeedka ayaa weli ka taagan dalka Kenya, halkaas oo dhawaan uu ka dhacay weerar aad u ballaaran oo ay fuliyeen rag katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dowladda Maraykanka ayaa tan iyo weerarkii Riverside waxay soo saartay digniino ku socda muwaadiniinteeda, taas oo ku aadan halis amni oo noloshooda la xiriirta, waxaana digniinahaas aad u dhibsaday dowladda Kenya.
War kooban oo xalay kasoo baxay safaaradda dowladda Maraykanka ee magaalada Nairoobi ayaa muwaadiniinta Ameericaanka ah ee jooga Kenya waxaa lagu amray iney feejignaadaan, islamarkaana ay jirto cabsi amni oo la xiriirta iney dhici karana weeraro waaweyn.
Safaaradda waxay muwaadiniinteeda ugu baaqday iney aad u taxadaraan, waxaana qoraalka kasoo baxay safaaradda Maraykanka ee Kenya lagu sheegay in weerarada laga cabsi qabo ay si gaar ah u beegsanayaan muwaadiniinta Ree-galbeedka.
Qoraalka kasoo baxay safaaradda Maraykanka waxaa dhanka kale lagu sheegay goobaha laga yaabo iney ka dhacaan weerarada ay ka digayaan, waxayna sheegeen iney u badinayaan in weeraro ka dhacaan magaalooyinka Nairoobi, Nafisha , Naniko iyo deegaanno kale oo dhaca xeebaha dalka Kenya.
Tan iyo weerarkii Riverside oo isbuucyo laga joogo, waa digniintii labaad oo ay soo saarto safaaradda Maraykanka ee Kenya, waxaana muuqaneysa in reer galbeedka ku dhaqan Kenya ay dareemayaan cabsi saa’id ah.
Dowladda Kenya ayaa aad u dhibsata digniinaha la xiriira dhanka amniga ee kasoo baxa safaaradaha reer-galbeedka, waxayna u aragtaa mid sii abuureyso xaalad cabsi ah, iyo inuu hoos u dhaca dhaqaalaah dowladda Kenya uga soo xarooda dalxiiska.
Weerarkii Riverside oo ay fulisay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu dilay kudhawaad 100 ruux, oo ay ku jiraan muwaadiniin iyo madax katirsan dowladaha Maraykanka iyo Yurub.